သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ၂၊ အမှတ်၂။
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 10:16 PM
ခါလာနဲ့ ခိုင်… ဘ၀ကို ခံယူပုံချင်း နှိုင်းပြသွားတာ ထိတယ် အိမ့်ရေ…
ကိုယ်ရတဲ့ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းမလား… စိတ်ညစ်စွာဖြတ်သန်းမလား…
အဲဒီရွေးချယ်မှုက ဘွဲ့ တွေ ဒီပလိုမာတွေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်တာကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သလိုပဲ….
ကလေးငယ်များအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးရေးရဲ့ အားထုတ်မှုအတွက် လေးစားကျေးဇူးတင်လျက်….
TLAM finally out!
thanks for advertising about it sis :D
will go and read ur writings when i have time sis!
မလေး ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ ၀တ်ထုတွေ တော်တော်များပြီနော်။ အဲဒါတွေကို တပေါင်းတစည်းတည်း pdf file နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းထားလားဟင်။ မလေးမှာ အဲလို တစုတစည်းတည်း သိမ်းထားတာရှိရင် ညီမလေး လိုချင်တယ်။ ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ပေးပါနော်။ တခြား ဘာအတွက်မှ မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ဒီတိုင်းလေးပဲ သိမ်းထားချင်တာရယ်၊ အချိန်ရတဲ့အခါတိုင်း ဖတ်ချင်တာရယ်။ အဲဒါပါပဲ။